Mareykanka oo eedeeyn kulul u jeedisay RW Kheyre [AKHRISO] – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo eedeeyn kulul u jeedisay RW Kheyre [AKHRISO]
Tuuryare 28 March 2018
Ku simaha kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Donald Yamamoto, ayaa ku eedeeyay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre in uu mas’uul ka yahay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay howlaha Dowladda Soomaaliya.
Bayaan uu soo saaray Donald Yamamoto ayaa lagu xusay in RW Kheyre iyo Xubno kale oo la safan ay ku howlan yihiin si aan sharci aheyn ay xilka uga tuuraan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ah Guddoonka Sare ee Golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Mr. Yamamoto ayaa xusay in Mudane Kheyre iyo xulafadiisa ay ka shaqeynayaan xasilooni darro hareysa Dalka Soomaaliya, taasi oo uu ku tilmaamay mid ka horimaaneysa horumarada dhawaan la gaaray.
Waxaa uu intaasi ku daray inta badan Hay’addaha Xukuumadda ay yihiin kuwa aad u doonaya in xilka laga tuuro Guddoomiye Jawaari, isagoo tusaale u soo qaatay TV-ga Qaranka oo loo diiday in uu ka hadlo Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Qoraalka Donald Yamamoto ayaa lagu xusay in khilaafkan siyaasadeed uu yimid kadib markii Guddoomiyaha Baarlamaanka uu diiday in uu saxiixo heshiisyo siyaasadeed.
Mr. Donald Yamamoto ayaa sidoo kale eedeeyn kulul u jeediyay Ku simaha Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Martin Dale, kaasi oo ku eedeeyay in uu la safan yahay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta waxuu ka xariiqay in Mr. Dale uu ka dalbaday Guddoomiye Jawaari in uu booska banaayo, taasi oo uu ku tilmaamay talaabo qaldan.
Waxuu ka dalbaday Mareykanka in ay talaabo ka qaadaan Ku simaha Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Martin Dale, kadib taageradii uu u muujiyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Xaalada siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya, ayuu ku tilmaamay mid khatar ku ah howlaha iyo horumarada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sikastaba, Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya Guddoonka Baarlamaanka iyo Xukuumadda uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Shirar siyaasadeed oo Caawa ka socda Magaalada Muqdisho